दाहाललाई ओलीको फोन : भेटौँ न, म केही कुरा गर्न चाहन्छु भने पछि…. – ramechhapkhabar.com
दाहाललाई ओलीको फोन : भेटौँ न, म केही कुरा गर्न चाहन्छु भने पछि….
काठमाडौँ — नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेटको प्रस्ताव गरेका छन् ।सोमबार बिहान ओलीले दाहाललाई फोन गरेर भेटको प्रस्ताव गरेको माओवादी केन्द्रका एक नेताले बताए ।
‘उहाँले भेटौ कुरा गरौं भनेर प्रस्ताव गर्नुभएको छ । प्रचण्ड कमरेडले भेट्न त के भयो र भेटौंला तर अहिले म बैठकमा छु भन्नु भएछ,’ दाहालनिकट ती नेताले भने, ‘त्यसपछि उहाँ(ओली) ले बिहान बेलुका समय मिलाएर भेटौँ न भन्नु भएछ । त्यसपछि प्रचण्ड कमरेडले पार्टी अलग अलग भएपछि अब के कुरा छ र भन्‍नुभयो ।’
ओलीले भने दाहालसँग आफूले केही कुरा गर्न चाहेको बताएका थिए । ‘तपाईंको कुरा तपाईसँग हुन्छ, मेरो कुरा मैसँग हुन्छ । मैले भनेको कुरा तपाईंले मान्नु पर्छ भन्ने पनि छैन, तपाईंले भनेका कुरा मैले मान्नु पर्छ भन्ने पनि छैन । तर म केही कुरा गर्न चाहन्छु,’ ओलीले दाहालसँग भनेका थिए ।
गत पुस १५ गते ओलीले दाहालपत्नी सीताको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न दाहाललाई फोन गरेका थिए । त्यसयता उनीहरुबीच सामान्य संवाद पनि भएको छैन ।
माधव नेपाल पक्षले राष्ट्रिय भेला नरोक्ने, ओलीले बोलाएको चियापानमा पनि नजाने
काठमाडौं, २ चैत्र । नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ नेताहरु माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षको बैठक सम्पन्न भएको छ । काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरमा बसेको बैठकले यही चैत्र ४ र ५ गतेको लागि आयोजना गर्न लागेको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला नरोक्ने निश्कर्ष निकालेको छ ।
आज विहान प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षसँगको भेटवार्ता सकारात्मक नभएको कुरा नेता नेपालले ब्रिफिङ गरेका थिए । र, आफ्नो पक्षले आयोजना गरेको भेला कुनैपनि हालतमा नरोक्ने निश्कर्ष निकालेको एक नेताले जानकारी दिए । र, ओली पक्षले बोलाएको चियापानमा पनि नजाने निर्णय गरेको छ ।